आज शुभ-अशुभ कस्तो छ तपाईको दिन ? हेर्नुहास् आजको राशिफल, Latest breaking news and updates on latest top stories, Video News, national, international, NRN, Gulf News, politics, sports, business, finance, entertainment, photo-gallery and more. Nepali News from Nepal and All over the Countries.
आज शुभ-अशुभ कस्तो छ तपाईको दिन ? हेर्नुहास् आजको राशिफल
आज मिति २०७६ साल साउन ७ गते । तदनुसार सन् २०१९ जुलाई २३ तारिख । शकसंवत् १९४१, परिधावी संवत्सर, दक्षिणायन, वर्षा ऋतु, नेपाल संवत् ११३९ दिल्लागा, श्रावण कृष्णपक्ष, षष्ठी, १२ः३० उप्रान्त सप्तमी तिथि मंगलबार ।
नविन कार्यसिद्धीको योग रहनेछ । आजको दिन शुभ रहेको छ । आय आर्जन क्षेत्र लाभदायी होला ।
व्यापार व्यवसाय फस्टाउने छ । नयाँ ज्ञानसीप सिक्ने अवसर मिल्ला ।
राजकीय क्षेत्रबाट सफलता मिल्नेछ । धन लाभ हुने योग छ । पति पत्नीबीचको माया प्रगाढ रहला ।
चोट पटकको भय छ दुर्घटनाबाट बँच्नुहोला । सम्यमित भएर अगाडी बढ्नुहोला । मातृपक्षबाट आर्शिवाद र प्रेरणा मिल्ने छ ।
अध्ययन अध्यापनमा सफलता मिल्नेछ । धन लाभ हुने छ भने राजनीतिक क्षेत्र लाभदायिक रहनसक्छ । नयाँ ज्ञानसीप सिक्ने अवसर मिल्ला।
गीत संगीतमा रुची बढ्ने छ । धन हानी हुनसक्छ । प्रेम प्रेमीकाबीचको सम्बन्ध उत्तम रहला ।
पुन मिलनको योग रहेको छ । कार्यमा सफलता मिल्ने छ । कामको चाप बढ्ने छ भने दाम्पत्य जिवनमा खटपट आउला ।
हर्ष उल्लास तथा अनुहारमा कान्ति र मनमा शान्ति छाउला । आजको दिन शुभ रहेको छ । प्रेम सम्बन्ध शुभ छ ।
धर्म कर्म लगायतका शुभ कार्यमा सहभागी हुने योग छ । धन लाभ र नयाँ कामको थालनी हुने देखिन्छ ।
आजको दिन त्यति शुभ छैन । चोटपटक लाग्न सक्छ । मनमा पिरले डेरा जमाउला । अन्तमा भने धन लाभ हुनसक्छ ।
मिष्ठान्न भोजन प्राप्त भएपनि मनमा पिडा रहला । आमापक्षबाट सहयोग मिल्ने छ ।
अनावश्यक खर्च बढ्ने छैन । उपहार प्राप्ती हुन सक्छ । शान्त र एकान्तमा दिन बित्नेछ । आजको दिन शुभ छ ।